Android undetectable အတွက်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ဝှက်ထားသောသူလျှို app များ (၂၀၂၀)
နေအိမ် Phone Spy Android undetected အတွက်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ဝှက်ထားသောသူလျှို Apps ၁၀ ခု
သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သည်သင်ယခင်ကကဲ့သို့မဟုတ်ခဲ့ပါ။ သူတို့ကတစ်ယောက်ယောက်ကိုလှည့်စားလိမ့်မယ်လို့မင်းထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းတို့မသေချာဘူး။
သင်၏ ၀ န်ထမ်းများသည်ကုမ္ပဏီ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုခိုးယူနေသည်။ မင်းတို့သူတို့ကိုပစ်ဖို့လိုတဲ့အထောက်အထားမရှိဘူး။
ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်အမှန်တရားရှာဖွေခြင်းသည်တစ်စုံတစ် ဦး ၏ဆဲလ်ဖုန်းကိုသူလျှိုဟုဆိုလိုသည်။ လျှို့ဝှက်လုပ်ဆောင်မှုအများစုပြုလုပ်သောနေရာဖြစ်သည်။ သူတို့နောက်ကိုလိုက်ရန်ပုဂ္ဂလိကမျက်စိငှားရမ်းခြင်းထက်ကျိန်းသေဈေးချိုသည်။
ဤဆောင်းပါး၌၊ သင့်အား Android အတွက်အကောင်းဆုံးအခမဲ့လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေးအက်ပလီကေးရှင်း ၁၀ ခုကိုသင်တွေ့ရှိရပြီးသင်တစ်စုံတစ် ဦး ၏ဖုန်းကိုလျှို့ဝှက်စွာစောင့်ကြည့်ခွင့်မပြုပါ။ သင်၎င်းကိုအသုံးပြုနိုင်သည် တစ်စုံတစ် ဦး ၏ဖုန်းကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အခမဲ့စွန့်စားမှုအဲဒီလူနဲ့သင့်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုမဖျက်ဆီးပဲ
#1 Minspy - Stealthiest Cat Burglar ထက်ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်သည်
၁.၁ ဘာကြောင့် Minspy ကိုဤမျှဖုံးကွယ်ထားသနည်း။
၁.၂ Android အတွက် Minspy သူလျှို app ကိုသင်မည်သို့သတ်မှတ်ခဲ့သနည်း။
#2 Cocospy - သူတို့အဲဒီမှာရှိမှန်းတောင်တောင်မှမယုံနိုင်ဘူး
၂.၁ တစ်စုံတစ်ယောက်၏ဖုန်းကို ၂၄/၇ ဖုံးကွယ်ထား သ၍ သင်စောင့်ကြည့်နိုင်သည်
၂.၂ Cocospy ကိုအဆင့်မြင့်မိုဘိုင်းထောက်လှမ်းရေးအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်စေတယ်
Spyier ဟာအကောင်းဆုံး app တွေထဲကတစ်ခုပါ
Spyine သည်အသုံးပြုရန်အလုံခြုံဆုံး application များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်
#7 မိတ္တူ 9
Auto Forward သည်အလွန်စျေးကြီးသည်
Minspy ကမ္ဘာပေါ်ရှိလျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေးအပလီကေးရှင်းများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် TechCrunch, Lifewire, Reader's Digest နှင့် Newsweek အပါအဝင်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိထိပ်တန်းမီဒီယာလိုင်းများတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိလူတစ်သန်းကျော်သည်ယနေ့ဤလျှောက်လွှာကိုအသုံးပြုကြသည်။
သင်သည် OS 4.0 နှင့်အထက်ရှိသည့်ခေတ်သစ် Android စမတ်ဖုန်းများသို့မဟုတ်တက်ဘလက်များအားလုံးကိုစစ်ဆေးရန် Minspy ကိုသုံးနိုင်သည်။ လျှောက်လွှာတွင်ဝက်ဘ်အခြေပြုအင်တာဖေ့စ်တစ်ခုရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်မည်သည့်ဝဘ်ဘရောက်ဇာမှတစ်ဆင့်အွန်လိုင်းစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအချက်အလက်များကိုရယူနိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ မင်း ဖုန်းကိုမထိဘဲပုံမှန်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းမွမ်းမံမှုများပြုလုပ်ပါ.
သင်သည် Minspy ကိုသုံးသောအခါသင်၏ privacy ကိုစိတ်ပူစရာမလိုပါ။ ဤအက်ပလီကေးရှင်းသည်တင်းကျပ်သော privacy code အောက်တွင်အလုပ်လုပ်ပြီးသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမည်သည့်အခါမျှသိမ်းဆည်းခြင်းသို့မဟုတ်မည်သူ့ကိုမျှဝေမျှခြင်းမပြုပါနှင့်။ စျေးကွက်ရှိအခြားအပလီကေးရှင်းများလည်းအလားတူပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Minspy ကို Android တွင်မတွေ့ပါ။ ပစ်မှတ်အသုံးပြုသူသည်သင်သူ့ကိုကြည့်နေသည်ကိုမည်သည့်အခါမျှမသိနိုင်တော့ပါ။ ဒီ application ကစမတ်ဖုန်းနဲ့တက်ဘလက်တွေကိုအဝေးမှစောင့်ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုထားတယ်။
အဘယ်ကြောင့် Minspy ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိမရနိုင်? Android အတွက် Minspy သေးငယ်တဲ့ 2MB software ကို utility ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကိုသင် download လုပ်ပြီးပစ်မှတ်ထားသည့်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်တွင်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးပြီးနောက်တွင်သင်သည်လျှောက်လွှာကိုဖုံးကွယ်ရန်ရွေးချယ်စရာရှိသည်။
အက်ပလီကေးရှင်းကိုကွယ်ဝှက်ပြီးသည်နှင့်၎င်းသည်နောက်ခံတွင်တိတ်ဆိတ်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ အက်ပလီကေးရှင်းသည်အက်ပလီကေးရှင်းအပြင်တပ်ဆင်ထားသည့်အက်ပလီကေးရှင်းများစာရင်းနှစ်ခုလုံးမှပျောက်ကွယ်သွားသည်။ Minspy သည်အသုံးပြုသူများကိုလျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းပေးပြီး၊ ဘက်ထရီကိုယိုစီးစေခြင်း (သို့) ဖုန်းကိုနှေးခြင်းမဖြစ်စေဘဲ
ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ app ကသေးလွန်းပြီးကောင်းစွာဝှက်ထားတယ် - ဘက်ထရီတွေအများကြီးမလိုအပ်ဘူး - ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီမှာရှိနေတာကိုသုံးစွဲသူတွေကဘယ်တော့မှသိမှာမဟုတ်ဘူး။ ၎င်းကိုလျှို့ဝှက်စွာစောင့်ကြည့်ပြီးအွန်လိုင်း dashboard တွင်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအချက်အလက်များကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
Android အတွက် Minspy ကိုမည်သည့်စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာမှမဆိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။ သငျသညျတည်ငြိမ်သောအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုနှင့်သင်ကြည့်ရှုချင်သောပစ်မှတ် device ကိုမှတိုတောင်းသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ access ကိုလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်တွင်မည်သည့်အထူးနည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုမလိုအပ်ပါ။
တပ်ဆင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်သည်ရိုးရှင်းပြီးသင်၏အချိန်မိနစ်အနည်းငယ်သာကြာသည်။ သင်ကြည့်ချင်သောဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်တွင်အက်ပ်သေးသေးလေးတစ်ခုကိုသင်ဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ပါ။
** သတိပြုပါ - ဈေးကွက်တွင် Android အတွက်ပစ်မှတ်ထားသောဖုန်းတွင်ဆော့ဝဲထည့်သွင်းစရာမလိုဘဲအလုပ်လုပ်နိုင်သောလျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေးအက်ပလီကေးရှင်းမရှိပါ။ သင်ထိုကဲ့သို့သောအက်ပလီကေးရှင်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုကိုတွေ့လျှင်၎င်းသည်အတုဖြစ်သည်! ၎င်းသည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုခိုးယူရန်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်သည်။
Android အတွက် Minspy ကို install လုပ်ရန်အောက်ပါအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။
အဆင့် ၁: Minspy အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပါ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိသင်၏အီးမေးလ် ID ၏အကူအညီဖြင့်။ သင်၏အီးမေးလ် ID သည်သင်၏အသုံးပြုသူအမည်ဖြစ်လာသည်။
အဆင့် ၂: နောက်လစဉ်ကြေးပေးသွင်းရပါမည်။ ပရီမီယံအစီအစဉ်သည်စက်ပစ္စည်းများစွာကိုသင်ကြည့်ရှုလိုပါကမိသားစုအစီအစဉ်သည်မိသားစုတစ်စုတည်းကိုကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည်။
အဆင့် ၃: သင်မှတ်ပုံတင်ထားသောအီးမေးလ် ID ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ခြင်းညွှန်ကြားချက်များကိုသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ Setup Wizard ကိုဖွင့်ပြီး Android ကို target platform အဖြစ်သတ်မှတ်ပါ။
ပစ်မှတ်ထားသည့်ကိရိယာပေါ်တွင် Minspy သူလျှို app ကို download လုပ်ပါ။ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်မှုညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။ တပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့်နှစ်မိနစ်သာကြာသည်နှင့်သင်အက်ပ်များကိုဝှက်နိုင်သည်။ Minspy ဖုန်းနှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်မိနစ်အနည်းငယ်စောင့်ပါ။
အဆင့် ၄: သူမကဟိုမှာ! သင်၏ Android စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်ကိုသင်၏ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာမှယခုအဝေးမှကြည့်ရှုနိုင်သည်။ လုံးဝအမည်မသိပါ သင်ဟာ device ကိုနောက်တဖန်မထိရန်လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်သူလျှိုလုပ်ရန်၎င်းနှင့်နီးရန်မလိုအပ်ပါ။
ဒိုင်ခွက်သည်အသုံးပြုသူများမိမိတို့၏ဖုန်းတွင်ဘာတွေလုပ်နေသည်ကိုစိတ်ကူးတစ်ခုပေးသည်။ လက်ဝဲရှိ options panel တွင်ဖုန်းရွေးချယ်မှုများကိုပိုမိုတွေ့နိုင်သည်။
ကြည့်ပါ Minspy အခမဲ့တိုက်ရိုက်သရုပ်ပြ သင် app ကိုမဝယ်ခင်!
Minspy သင့်အတွက်ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ။ ဒီအက်ပ်ကသင့်ကိုအားကောင်းတဲ့ဖုန်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုအင်္ဂါရပ်များစွာကိုသုံးခွင့်ပေးတယ် -
စာကိုဖတ်ပါ Minspy ကို အသုံးပြု၍ တစ်စုံတစ်ယောက်၏အဝင်နှင့်အထွက်စာတိုများကိုသင်ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ ၎င်းတွင်သူတို့၏ဖျက်လိုက်သောစာများလည်းပါ ၀ င်သည်။
ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းများကိုစစ်ဆေးပါ။ Minspy ကသင့်ကိုခွင့်ပြုတယ် သူတို့ရဲ့အဝင်နဲ့အထွက်ခေါ်ဆိုမှုများကိုစစ်ဆေးပါ။ ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းများသည်ဆက်သွယ်ရန်အမည်၊ ခေါ်ဆိုမှုကြာချိန်နှင့်အချိန်တံဆိပ်စသည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြထားသည်။
ဆက်သွယ်ရန်: သင်သည်သူတို့၏ဆက်သွယ်ရန်စာအုပ်ကို Minspy ဖြင့်ကြည့်နိုင်သည်။ သင်၏အမည်၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ လိပ်စာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ အီးမေးလ်နှင့်အခြားအရာများကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။
တည်နေရာကိုလိုက်နာပါ ဒီ application ကဆဲလ်ဖုန်းတည်နေရာကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီသိနိုင်ပါတယ်။ အတိတ်နေရာများကိုပထဝီဆိုင်ရာကိုသြဒီနိတ်ကဲ့သို့အသေးစိတ်နှင့်အတူမြေပုံတစ်ခုပေါ်တွင်ကပ်ထားခြင်းကိုလည်းတွေ့နိုင်သည်။
login အသေးစိတ်ကိုရှာရန် Built-in keylogger သည်သူတို့၏အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်ကိုရှာဖွေရန်ကူညီနိုင်သည်။ keylogger ဆိုသည်မှာစာရိုက်သည့်အခါ keystrokes များကိုမှတ်တမ်းတင်သော program တစ်ခုဖြစ်သည်။
လူမှုမီဒီယာကိုစစ်ဆေးပါ။ သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို Facebook နဲ့ Twitter လိုလူမှုမီဒီယာစာမျက်နှာတွေမှာတွေ့နိုင်တယ်။
ဘရောင်ဇာသမိုင်းကိုကြည့်ပါ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Minspy သည်သူတို့၏ browser သမိုင်းကိုလိုက်နာရန်နှင့်အကြိုက်ဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ site ဖော်ပြချက်များနှင့်ဆိုက်၏အကြိမ်အရေအတွက်ကဲ့သို့အသေးစိတ်များကိုကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည်။
Minspy သည်အီးမေးလ်စာဖတ်သူ၊ မှတ်စုကြည့်သူ၊ ပြက္ခဒိန်ရက်စွဲနှင့်အခြားအရာများအပါအ ၀ င်ဤတွင်ဖော်ပြထားသောအခြားအရာများအပြင်အခြားအရာများကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးသည်။
စျေးကွက်ရှိ spy app များနှင့်မတူဘဲ Minspy သည်သင်၏ privacy ကိုအလေးအနက်ထားသည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမည်သည့်နေရာတွင်မျှသိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိသကဲ့သို့ ၀ န်ထမ်းများမှလည်းမရယူနိုင်ပါ။ သင်သည်သင်၏ privacy ကိုထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲလျှောက်လွှာကိုသုံးနိုင်သည်။
Minspy သည် rooting မပါပဲအလုပ်လုပ်သည်
Minspy သည်စျေးကွက်ထဲရှိတစ်ခုတည်းသော app ဖြစ်ပြီးပစ်မှတ်ထားသည့်ဖုန်းကို root လုပ်စရာမလိုပဲအဆင့်မြင့်ဖုန်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုအင်္ဂါရပ်များစွာကို ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုသည်။ ဒီ app က Android ၏စတော့ရှယ်ယာဗားရှင်းတွင်အလုပ်လုပ်သည်။
သင် root မလိုအပ်သောကြောင့် Minspy ကိုအန္တရာယ်ကင်းစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်၏စက်၏အာမခံချက်ကိုပယ်ဖျက်ရန်သို့မဟုတ်၎င်းကို malware ဖြင့်ကူးစက်ရန်မလိုအပ်ပါ။
Minspy တွင်ကွန်ယက်အခြေပြုမျက်နှာပြင်ရှိသည့်အတွက်အသုံးပြုရန်အလွန်အဆင်ပြေပါသည်။ သင်သည်သင်၏ဖုန်းသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာမှအပလီကေးရှင်းကိုအဝေးမှကြည့်ရှုနိုင်သည်။ သင်သည် Android ၏စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်နှင့်နီးရန်မလိုအပ်ပါ။ မည်သည့်အချိန်မဆို၎င်းကိုသင်စောင့်ကြည့်နိုင်သည်။
ဒီ application ကိုယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါတယ်
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၉၀ မှလူ ၁ သန်းကျော်သည် ၁TP5T ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဒီ app ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်။ သင်ကြော်ငြာအဖြစ်အလုပ်လုပ်ရန် app ကိုသင်အားကိုးနိုင်သည်။ ဒါဟာထိထိရောက်ရောက်အလုပ်လုပ်တယ်နှင့်သင်၏အချိန်ကောင်းစွာကျိုးနပ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Minspy သည်စျေးနှုန်းချိုသာသောလစဉ်ကြေးပေးစွမ်းနိုင်သည့်စွမ်းဆောင်ချက်များစွာကိုပေးသည်။ ဒီအပလီကေးရှင်းသည်တစ်လလုံးလုံးအသုံးပြုရန်အတွက် DVD ရုပ်ရှင်အကြောင်းကုန်ကျသည်။ Android ထုတ်ကုန်မျိုးစုံကိုလျှော့စျေးဖြင့်စစ်ဆေးနိုင်သည်။
သင့်အားခေါ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဒုတိယလျှို့ဝှက်ထားသော Android သူလျှို app ရှိသည် နင်။ ၎င်းသည်နာမည်ကောင်းနှင့်ကျော်ကြားသော app တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီအက်ပလီကေးရှင်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်လူကြိုက်များပြီးသူလျှိုစွမ်းအားအချို့ကိုပေးထားသည်။ သင်သည်ဤအက်ပ်ကို သုံး၍ နောက်ဆုံး Android ဖုန်းများသို့မဟုတ်တက်ဘလက်များကိုစောင့်ကြည့်နိုင်သည်။
Cocospy သည် Forbes ကဲ့သို့သောအွန်လိုင်းမီဒီယာလိုင်းများအပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ CNETနှင့်ဘီဘီစီ။ ဤအက်ပလီကေးရှင်းကိုသုံးစွဲသူများအားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများ လျှောက်လွှာကိုကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ရန်သင်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်း app သည်အလွန်ကောင်းမွန်သော privacy ကိုပေးထားသည်။
Cocospy ကိုသုံးပြီးတစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းကို 24/7 stealth mode နဲ့ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဤအက်ပလီကေးရှင်းသည်ဈေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံး Android သူလျှိုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Cocospy ဟာဖုန်းကွယ်တဲ့စောင့်ကြည့်ရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ Android ဗားရှင်းသည်နောက်ကွယ်၌လျှို့ဝှက်အလုပ်လုပ်သည်။ အသုံးပြုသူမသိဘဲအလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်ဖုန်းကိုနှေးကွေးစေခြင်းသို့မဟုတ်ဘက်ထရီကိုအားမထုတ်ခြင်းကြောင့်၎င်းကိုရှာဖွေရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
သင်သည်မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် Cocospy ကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။ တပ်ဆင်ရန်ညွှန်ကြားချက်များသည်ရှင်းလင်းပြီးလိုက်နာရန်လွယ်ကူသည်။ ဒီအပလီကေးရှင်းဟာဖုန်းကို root လုပ်စရာမလိုဘဲပစ်မှတ်ထား Android စမတ်ဖုန်းဒါမှမဟုတ်တက်ဘလက်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ Web-based interface သည်အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးပျော်စရာကောင်းသည်။
Cocospy သည်စျေးကွက်တွင်လူသိများသောတံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မိဘများအကြိုက်ဆုံးဖြစ်ပြီးသူတို့၏ကလေးများနှင့်လမ်းလွဲနေသောအပေါင်းအဖော်များမှ tabs များထားလိုသူများကိုမျက်ခြည်မပြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤလျှောက်လွှာသည်သင့်အားအန္တရာယ်မဖြစ်စေဘဲအလုပ်လုပ်ရန်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။
ဒီ app ကလုံခြုံတယ်
သူလျှိုအက်ပလီကေးရှင်းများသည်မကြာခဏဟက်ကာများခံရပြီးသုံးစွဲသူအချက်အလက်များကိုခိုးယူသည်။ Cocospy အဲဒီလိုမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ထို့အပြင်၊ အက်ပလီကေးရှင်းသည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမည်သည့်နည်းနှင့်မျှသိမ်းဆည်းခြင်းမရှိဘဲဆိုလိုသည်မှာသင်သည်၎င်းကိုစိုးရိမ်စရာမရှိဘဲအသုံးပြုရန်လုံခြုံသည်ဟုဆိုလိုသည်။
သင်သည် Cocospy ဖြင့်ဖုန်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုအင်္ဂါရပ်များပြည့်စုံစွာရရှိသည်။ ဒီအပလီကေးရှင်းကသင့်အားပစ်မှတ်ထားသည့်စက်ပစ္စည်းနှင့်ဖြစ်ပျက်နေသမျှအရာအားလုံးကိုမြင်တွေ့နိုင်စေသည်
တစ်စုံတစ် ဦး ၏သီးသန့်နှင့်အုပ်စုလိုက်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများကိုသင်ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
3D လမ်းမြင်ကွင်းကိုဖွင့်ထားသည့် virtual map တွင်သူတို့လှုပ်ရှားမှုကိုလိုက်နာပါ။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့အားဖုန်းခေါ်ရန်လျှောက်လွှာတစ်ခုရှိပါသည် သူလျှို။ ၎င်းသည် Android အတွက်ထိပ်တန်းဖုန်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုကိရိယာဖြစ်သည်။ သင်၏ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်ကိုအဝေးမှကြည့်ရှုရန်၎င်းကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်သည်သင်၏ online dashboard သို့လျှောက်လွှာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုအချက်အလက်များကိုပို့သည်၊ ၎င်းကိုမည်သည့်နေရာမှမဆိုသင်ရယူနိုင်သည်။
ဒီအပ်ပလီကေးရှင်းမှာသုံးစွဲသူအမည်များနှင့်စကားဝှက်များကိုဖမ်းယူနိုင်တဲ့ keylogger တစ်ခုပါရှိပါတယ်။
root လုပ်စရာမလိုဘဲ app ကိုသုံးနိုင်သည်။
ဒီ application ကတစ္ဆေလိုပုန်းနေတယ်။
အက်ပ်များကို သုံး၍ အဝေးမှဖျက်နိုင်သည်။
Spyine သည်အဝေးဆုံးစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်ခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ၏ Android ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်ကိုသူလျှိုလုပ်ရန်အပြင်၎င်းကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းကိုအရန်ကူးရန်၎င်းကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ Spyine သည်အခမဲ့သရုပ်ပြပါဝင်ပြီးဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရနိုင်သည်။
သငျသညျ username နှင့် password ကိုဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်။
Spyine ကိုသင်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည် -
ဒီ app က Android ပေါ်မှာနောက်ကွယ်မှာဝှက်ထားသောပြေး။
ဒီ application ကအသုံးပြုရလွယ်ကူတဲ့ interface ကိုပေးထားပါတယ်။
Spyine သည်လုံခြုံစိတ်ချရပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသည်th ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းအပေါ်အကြံပြုချက်များ။
Fami360 မိဘများအတွက်အထူးဖုန်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းကိုတစ်စုံတစ် ဦး ၏ Android ကိရိယာကိုလျှို့ဝှက်စွာစောင့်ကြည့်ရန်သင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ မိဘများအနေဖြင့် ၄ င်းတို့၏ကုန်ကျစရိတ်များကို ၂၄/၇ စောင့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက်ဤ app သည်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ဒီ application ကိုဝှက်ထားနိုင်ပါတယ်
Fami360 သည် Android အတွက်အကောင်းဆုံးလျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းထားသောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Copy9 သည်လူသိများသောဆဲလ်ဖုန်း spy app ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ FB စကားဝှက်အက်ကွဲသောလက္ခဏာအတွက်ကျော်ကြားသော်လည်းအခြားဖုန်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းအင်္ဂါရပ်များကိုလည်းပေးထားသည်။ ဒီအက်ပ်ကသင့်ကိုမည်သူမဆို၏ Android ဖုန်းတွင်ခလုတ်များသိမ်းထားနိုင်သည်။
Copy9 သည်အလွန်ကောင်းသော app တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီ application ကခေါ်ဆိုမှုများနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာအစိုင်အခဲ keylogger နှင့်အတူပါရှိသည်။
Copy9 သည်လက်ရှိ Android ကိရိယာများအားလုံးတွင်အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပါ။
အန်းဒရွိုက် firmware အဟောင်းတွေ၊ Copy9 များများအလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်။
StealthGenie သည်တစ်ချိန်ကလူကြိုက်အများဆုံး spy app တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ဒီ app ကိုမကြာမီကပြproblemsနာများရှိခဲ့သည်။ သို့သော်၊ ဤအက်ပလီကေးရှင်းသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်၎င်း၏ဖောက်သည်များထံမှအကောင်းမြင်သုံးသပ်ချက်များကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
သင်၏ Android ဖုန်းကိုထိန်းချုပ်ရန် StealthGenie ကိုသုံးနိုင်သည်။
StealthGenie ဖြေရှင်းချက်သည်တန်ဖိုးရှိသည်ထက်ပိုသောပြmoreနာဖြစ်နိုင်သောကြောင့်နံပါတ် ၈ တွင်ရှိသည်။
Auto Forward သည်လူသိများသော ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး နှင့်ကလေးစောင့်ကြည့်ရေးဆိုင်ရာအဖြေရှာခြင်းအတွက် Android အတွက်သီးသန့်ဖြစ်သည်။ ဒီအက်ပလီကေးရှင်းဟာကိုယ်ပျောက်ကိုယ်အင်္ဂါတစ်ခုတပ်ဆင်ထားတဲ့အတွက်သင့်ကို Android ဖုန်းကိုဖမ်းဆီးဖို့မလိုဘဲစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Auto Forward နှင့်သင်ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်အချို့ရှိသည်။
သင်သည် screenshot tool တစ်ခုကဲ့သို့သောအဆင့်မြင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုရရှိသည်။
Auto Forward ကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံမပေးနိုင်ပါ၊ ၎င်းသည်အလွန်စျေးကြီးသောကြောင့် -
သင်စက်တစ်ခုတည်းကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တစ်လကို $70 နီးပါးပေးရပါတယ်။
Auto Forward သည်အလွန်ဈေးကြီးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းတွင်နံပါတ် ၉ ဖြစ်သည်။
ငါတို့အတွက်နောက်ဆုံးဖြေရှင်းချက်ကို GuestSpy လို့ခေါ်တယ်။ ၎င်းသည် Android အတွက်ရှာဖွေမတွေ့ရှိနိုင်သောအခမဲ့သူလျှို app တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင် app ကိုအမည်ဝှက်ဖြင့်သုံးနိုင်သည်။ ပစ်မှတ်ထားသောအသုံးပြုသူကသင့်ကိုတွေ့လိမ့်မည်ကိုစိုးရိမ်စရာမလိုပါ။
ဒီအပလီကေးရှင်းသည်လူမှုမီဒီယာကို root မပါဘဲစောင့်ကြည့်နိုင်သည်။
ဤအပလီကေးရှင်းသည် Android 2.0 မှ 5.0 သို့သာပြေးနိုင်သည်။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးအခမဲ့လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေးအက်ပလီကေးရှင်း ၁၀ ခုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြုချက်များကိုသင်တွေ့ရှိမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
သင်သည်ဤစာရင်းရှိမည်သည့် app ကိုမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်၊ သို့သော်အမြစ်မပါဘဲအလုပ်လုပ်ပြီးအစိုင်အခဲအင်္ဂါရပ်အချို့ရှိသောကြောင့်အကောင်းဆုံးရလဒ်များအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးစာရင်းအနည်းငယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။